Ukuqhathanisa kweselula: Doogee V10 vs Doogee V20 | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 20/12/2021 08:51 | AmaSelula, I-Telephony
U-Doogee uyaqhubeka nokubheja emakethe omakhalekhukhwini abahlakaniphile nabamangelengele, okungukuthi, banochungechunge lwezimpawu ezibenza bahluke futhi bamelane ikakhulukazi. Lena yindlela abeze ngayo ukwethula i-V20, idivayisi ebekwe njengomphumela weminyaka eminingana yesipiliyoni nokuzinikela. I-Doogee V20 entsha ilandela ngokuqondile i-Doogee V10, imodeli ezuze imiphumela emihle. Zombili izisetshenziswa zinokufana okuthile, kodwa kusobala ukuthi zinomehluko omkhulu ngenxa yokuqanjwa okusha kweminyaka yakamuva, siyaziqhathanisa.
Sebenzisa ngokunenzuzo i- Ukunikezwa kwe-Doogee V20 Dual 5G ngokubhalisa phakathi kwabathengi bokuqala abayi-1.000.
1 Ukufana kwamadivayisi womabili
2 Umehluko phakathi kwazo zombili izisetshenziswa
Ukufana kwamadivayisi womabili
Okunye ukufana okukhulu phakathi kwalezi zisetshenziswa zombili ukuthi zombili ziqala ngesisekelo sokuthi uma zingaphuli, akumele zilungiswe. Womabili amamodeli afaka iphrosesa eyisishiyagalombili ukuze athuthukise ukusebenza kwawo futhi anikeze izici ngokulandelana kosuku. Ngendlela efanayo, Banenzwa yezigxivizo zeminwe ebekwe eceleni kwe-bezel yedivayisi, ikhamera ye-selfie engu-16MP kanye nokushaja okusheshayo okufika ku-33W okuhambisana ne-NFC. kanye nokusekelwa kwamafrikhwensi amaningi awenza asebenzisane kakhulu kunoma iyiphi indawo.
Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, zombili lezi zisetshenziswa zinezitifiketi eziphezulu kakhulu mayelana nokumelana nesimo sezulu esibi sazo zonke izinhlobo njengokuthi IP68, IP69K kanye nempilo ejwayelekile ye-MIL-STD-810 nesitifiketi sayo esilandelanayo.
Nokho, manje sekuyisikhathi sokugxila emehlukweni osobala.
Umehluko phakathi kwazo zombili izisetshenziswa
Njengesici esihlukile, i-Doogee V10 endala yayine-thermometer ye-infrared ngemuva ukuze ikwazi ukukala izinga lokushisa ngokushesha, nokho, I-Doogee V20 ifune ukuya phambili futhi yengeze isikrini esisha ngemuva esizosinika ulwazi oluthile olufana nezaziso, isikhathi nokunye okuningi. Okuthile kuze kube manje sesikubonile kuphela kwezinye izindawo ezisezingeni eliphezulu.
Isikrini esingcono se-AMOLED nokucaca okuphezulu
Isikrini sangemuva ukuze usinikeze ulwazi
Isikrini esingaphambili noma esikhulu naso sithathe igxathu elibalulekile, futhi manje sinesikrini esicwebezelayo I-AMOLED enesinqumo esingu-6,43 inch FHD +, ezothatha indawo ye-LCD yakudala engu-6,39-inch HD + resolution efakwe ku-Doogee V10. Lokhu ngokungangabazeki kube ngenye yezinyathelo ezibaluleke kakhulu mayelana nokujwayela ubuchwepheshe besizukulwane sakamuva, ngendlela efanayo Iphaneli ye-AMOLED ye-Doogee V20 eyenziwe ngabakwaSamsung izohlinzeka nge-20: 9 aspect ratio. uma kuqhathaniswa ne-19: 9 ye-Doogee V10, enokugqama okukhulu namandla e-HDR, futhi ithuthukisa ukukhanya ekwazi ukukunikeza.
Kulokhu usayizi ku-mAh webhethri wehliswa kakhulu, Ngenkathi i-Doogee V10 inikeza i-8.500 mAh, i-Doogee V20 entsha izohlala ku-6.000 mAh. Ngenkathi zombili zigcina ukushaja okusheshayo okungu-33W, i-Doogee V20 entsha izohlinzeka ngokushaja okungenantambo ngezinga le-Qi elifinyelela ku-15W, edlula i-10W yokushaja okungenantambo i-Doogee V10 eyigcinayo kuze kube manje. Lokhu kwenza i-Doogee V20 icwebezele futhi ibe lula, nokho, u-Doogee uthembisa ukuthi isikhathi sokusetshenziswa kwedivayisi sigcinwa ngebhethri elinamandla aphansi ngenxa yokulungiselelwa kokubili ku-Operating System kanye nezinga le-Hardware, konke Lokhu ngokusobala kuyazuza kuphaneli ye-AMOLED ukuthi manje isebenzisa futhi okuthuthukisa ukusetshenziswa kwesikrini kuvuliwe.
Ikhamera ingelinye lamaphuzu elithinteke kakhulu ngokulungiswa, ake sibheke womabili amakhamera:
Ikhamera enkulu ye-64MP
20MP ebusuku ikhamera
Ikhamera ye-engeli ebanzi engu-8MP
Ikhamera enkulu ye-48MP
Kusukela kuleli phuzu ikhamera isithuthuke ngendlela emangalisayo njengoba sesibonile, lisekhona (njengoba sike sasho ngaphambilini) ukusebenza kahle kwekhamera ye-selfie engu-16MP ngaphambili.
Ezingeni lenkumbulo nelokugcina, i-Doogee V20 ikhula isuka ku-128GB ye-V10 iye ku-256GB yemodeli yamanje, kusetshenziswa ubuchwepheshe be-UFS 2.2 ukuthuthukisa ukusebenza kokudluliswa kwedatha. Vele, inkumbulo engu-8GB ye-RAM yazo zombili izisetshenziswa iyagcinwa.
Ngokungangabazeki i-Doogee V20 iwukuziphendukela kwemvelo okusobala okuhlose ukusekela ifa le-Doogee V10, ukuqhubeka kochungechunge lwe-Doogee V oluzophinde lunikezwe izaphulelo ezinhle nezipesheli kuphothali esemthethweni ye-Doogee. Usuku lokukhishwa luzomenyezelwa maduze futhi abathandi bamafoni aqinile bazokwamukela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Ukuqhathanisa kweselula: Doogee V10 vs Doogee V20